Umculo weClassical Music on Funeral
Xa ufumene umntu owamthandayo uswele, akukho nto inokusithuthuzelayo. Ngokungafani nenxeba yenyama, akukho ncedisi-bhanki yokwenza ukuba sizive siba ngcono. Izalubhe zomzwelo ziyahlukileyo kumntu wonke, kodwa inkxaso yabahlobo kunye nosapho, ukutya kunye nomculo kunokunceda uncedo olukhulu. Kuloluhlu lwemimiselo yendawo yomngcwabo, ndidibanise ukhetho lweengcezu zeklasi ezingadlalwa ngexesha lomkhosi ukuba zenze umvuzo ongenakuzikhumbuleka kwaye onenjongo kulabo abadlulileyo.
Anton Dvorak - Symphony No. 9, Largo, 2 Mvmt.
Music Classical Funeral. Jupiterimages / Getty Izithombe
Emva kokuza eUnited States, uDvorak waqamba i-symphony yakhe ye-9 ngo-1893, ngomoya we-African American ne-American Indian folklore. Wafezekisa impumelelo enkulu kwi-nqununu yehlabathi yale sym symphony ne-New York Philharmonic eNew York City. Ndiyifumene ukuba ukunyakaza kwe-largo kunzima ngakumbi xa uyazi iingoma kwi-choral version kwaye uyibhale ekhanda lakho njengoko uphulaphule umculo. (Jonga le clip ye-YouTube ye-choral version, "Goin 'yasekhaya.")
UClaude Debussy - La cathédrale engloutie
Ingolwazi oluqhelekileyo apha phaya ukuba udibaniso lwam olu nqaku luba lukhulu. Sekudlulileyo iminyaka elishumi ukusuka ndaqala ukuva iLa cathédrale engloutie eyenziwa kwi- pianist graduate recital. Njengoko ndachaza kanye ngaphambili, phakathi kwentsebenzo bekuve ngathi kwakungowona kunye nepiyano. Ixesha limile yaye ndathunyelwa kwihlabathi likaDebussy. Esi siqwengqeleko sokukhumbula imiphefumlo yabathandekayo bakho.
UGabriel Faure - "KwiParadesi" evela kwi-Requiem
Ngamazwi alumkileyo kaMary Poppins, i-spoonful yeyeza iyeza loo mayeza ahla. Le ngqungquthela yomculo evela kwiFaure ye-Requiem iya kunciphisa umphefumlo wakho njengoko uthetha kakuhle kwakho kwabo bahambe kweli hlabathi. Umbhalo wesiLatini umthandazo kwiingelosi ukukhokela imimoya ephumayo ibe yiparadesi apho baya kuhlanganiselwa ngabafel 'ukholo abaya kubakhokela kwisixeko esingcwele saseYerusalem.
UGabriel Faure - "Pie Yesu" kwi-Requiem
Ingoma enhle yengelosi ingumthandazo eNkosini ukubonelela ngokuphumla okuphakade. Ebhalwa nguGabriel Faure phakathi kowe-1887 no-1890, "uPi Yesu" yintembeko ephuma kwi-Requiem yakhe edumile. Ngokungafani nezinye iimfuno eziphambili , uFaure ulamano . Ubunzima obubuthathaka kunye nobuthathaka beli qhekeza bubangela ubungqina obunzulu obunzulu kwaye bubeka umoya wokuhlonela.
UGiuseppe Verdi - "Ave Maria" wase-Otello
Le ngqungquthela i-aria ivela kwi- seconddi yeVerdi ukuya kwi-opera yokugqibela, u-Otello, yokuqala eyenziwa ngowama-1887. Ukuhlaziywa ngu-Desdemona kwixesha layo lokugqibela, "u-Ave Maria" ngumthandazo wokuthula kwihlabathi eliguqulwa ngumkhweli wakhe onomona , Otello. Imivalo yayo yokuvula iyathula kunye nokuphefumla-, ihambisa iDesdemona ukuphazamiseka. Njengoko iqhubela phambili, ikhula ngokukhawuleza ibe isikhalazo esikhulu ngaphambi kokuba iphele ngokulula, edibeneyo "Amen."
UMaurice Durufle - Ubi caritas
Kubhaliwe njengenxalenye yeetetet ezine ngo-1960, ukukhanya kwe-Dubifle ye-Ubi caritas kukhanya ngakumbi. Nangona ubukhulu bayo, isiqwenga sithetha intliziyo kwaye sinika induduzo, nangona ungayazi intsingiselo yombhalo wayo.
Xa uthando kunye nothando, uThixo ukhona.
Uthando lukaKristu luye lwahlanganiselana nathi.
Masibe nemihlali kwaye sibe nemihlali kuye.
Masiyike, size simthande uThixo ophilileyo.
Kwaye simele sithandane ngomoya onyanisekileyo.
Nangona imibhalo yecawa yokubhiyozela ukuzalwa kukaYesu Kristu kunye neentsuku eziqhelekileyo zeKrismesi, u-Lauridsen wobugcisa obukhethileyo unokwenene ukubetha iintliziyo. Kulo lonke ucezu, uLauridsen usebenzisa izityebi eziphathekayo ze-harmonic ngezinye iziganeko ezenziwa ngethuba ngelixa zenziwe iCapella. Ndiyathuthuzela ukwazi ukuba nangona abantu behluke, sinokudibanisa ngezwi kunye nesandi ukudala umculo ogqithisa ixesha kunye nendawo.
URalph Vaughan Williams - I-Lark ihla
Mhlawumbi into endiyithandayo kakhulu yiVaughan Williams, I-Lark Ukukhuphuka ithatha iinguqu ezininzi ezahlukeneyo kuxhomekeke kwimoya yakho. Xa ujabule, ivuselela iinkumbulo ezikhokelela kuwe. Xa udabukile, kunika uxolo kunye ne-catharsis. Uququze ngo-1914, uWilliams esekelwe uLark okhupha ngombongo wesiNgesi waseburhulumenteni, uGeorge Meredith, kunye nombhalo opapashwe kunye namanqaku:
Uvuka kwaye uqala ukujikeleza,
Uhlahla isiliva yesilivere yesandi,
Kwiinkonzo ezininzi ngaphandle kwekhefu,
Kwi-chirrup, umkhwelo, slur kwaye ugubungele.
Ukuhlabelela aze azalise izulu lakhe,
'Uthando lomhlaba awenzayo,
Kwaye wenyuka uye phezulu,
Intlambo yethu yindebe yakhe yegolide
Yaye iwayini ehamba
ukuba asiphakamise naye njengoko ehamba.
Uya kulahleka kwiindandatho zakhe zomhlaba
Ekukhanyeni, kwaye emva koko ukubetha okuyingqayizivele.
USamuel Barber - Adagio for Strings
I-adagio engalibalekiyo iyaziwa ngokuziwayo ngenxa ye-pathos yayo. Kuzo ezo zitofu ngokwaneleyo ukuba uhlale emngcwabeni ngaphandle kokukhalaza, uya kuba nzima ukugcina uxolo emva kokuba le adagio iqale. Inempembelelo enkulu kubaphulaphuli bayo; ubuchule obuphawulekayo bokuzakhela ngokwabo ukucamngca nokucamngca. Ngenxa yalokhu, i-Barber's Adagio yeZiqhinga yadlala kwimingcwabo kaMongameli uFranklin D. Roosevelt noJohn F. Kennedy, kunye noPrince Grace noRaineir III, iNkosana yaseMonaco. Kaninzi "
UWolfgang Amadeus Mozart - Ave Verum Corpus
Kubhalwe ngo-1791, lo msebenzi we-choral nguMozart omkhulu unokuncedisa intliziyo ephukileyo. Ewe, sonke siyahlupheka, kodwa njengoYesu oye wahlupheka, sinokufumana usindiso oluvukileyo size sidle isidlo sasezulwini emva kokufa.
Uludwe lwee-Operas nguGiuseppe Verdi
Sonata yeNyanga yeBeethoven
Music Piano Classical Music
U-Erik Satie - i-Trois Gymnopedies
Umculo ogqwesileyo kaFranz Liszt kwi-Play Classical Music Playlist
Uludwe lweMidlalo yeBeethoven eye yabonakala kwiimifanekiso
IiNyanga ezine zeAntonio Vivaldi
I-Best Classical Violin Music
Iingcebiso zokulahla umqhubi ukusuka kwi-Fairway
Qonda ii-Angle Ble Ball - Iingcebiso zeBilliards Best
Iingqungquthela zeConjugation zesiLwimi saseTaliyane 'Finire' (Ukugqiba okanye Ukuphela)
Ziqhelanise ukuxinezeleka kunye nokukhunjulwa
Amasiko obugqwirha banamhlanje
Kutheni Kuthetha ukuba 'Kufikelele kwiPin' eyaziwa ngokuba yi 'KP'?
Izibonelelo ezifumanekayo kumaLungu eSouth Congress
Ziziphi Iilwimi Zengelosi ?: Iingelosi Zithetha Njani?
Indlela yokudibanisa "I-Briller" (ukukhanya)
Iprofayile yeBarry Goldwater
Ukulungiselela i-Bee yeJografi
Iingqungquthela zasehlobo zaseRay Bradbury
51 Ama-Euphemsms for 'Ukhutshiwe'
Ulwahlulo lwezinambuzane - I-Aptergota
10 Imfundo yeeMculo yeeMvavanyo neeMidlalo neMexico
Izakhiwo eziphikisanayo kwiNgxabano